မနျစီးတီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျကြိနျစာဆိုးကို မှျောဆရာဒီဘရိုငျးနားက ခဖြေကျြပေးနိုငျတော့မလား – Sports A2Z
မနျစီးတီးအသငျးက ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျအတှငျးကပဲ သူတို့အသငျးရဲ့ မှျောဆရာ ဒီဘရိုငျးနားကို ၄ နှဈ သကျတမျးတိုးလိုကျတယျ။ တနှဈကို ပေါငျသနျး ၂၀ ပေးခရြေမယျ။ ဒါဟာ မနျစီးတီးကို လှမျးမိုးနတေဲ့ ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ အရှိနျအဝါဖွဈပွီး သူက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ လစာအမွငျ့ဆုံး ကစားသမားဖွဈလာခဲ့တယျ။
ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ လုပျရပျနဲ့ ရညျရှယျခကျြကိုကွညျ့ရငျ သူက စာခြုပျသဈကိစ်စမှာ မနျစီးတီးနဲ့ စကားပွောဖို့ အေးဂငျြ့ကို အသုံးမပွုဘူး။ Data ကုမ်ပဏီကို အပျပွီး သူ့စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ပတျသကျလို့ Report ရေးခိုငျးခဲ့တယျ။ ထှကျလာတဲ့အဖွကေ ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ ရညျရှယျခကျြဖွဈသလို အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတယျ။
ဒီဘရိုငျးနားကို ဆုံးရှုံးရရငျ မနျစီးတီးဟာ သမိုငျးတလြှောကျ ပထမဆုံးရယူဖို့ ရညျရှယျထားတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားနဲ့ ဘယျလောကျထိ အလှမျးဝေးသှားမလဲဆိုတာ Data နဲ့ စာတမျးက အတိအကထြှကျလာခဲ့တယျ။ ဒီနှဈမှာ UCL ကိုသိမျးမယျလို့ ဖလား ၄ လုံး အိပျမကျမကျနတေဲ့ မနျစီးတီးနဲ့ ဂှါဒီယိုလာအတှကျ ငွငျးကှယျမရတဲ့ အမှနျတရားဖွဈတယျ။
သူက ဒါကိုကိုငျပွီး မနျစီးတီးရဲ့အောငျမွငျမှုမှာ သူဘယျလောကျထိ အခရာကနြလေဲဆိုတာ ပွောပွီးသားဖွဈစခေဲ့တယျ။ စာခြုပျအတှကျ ညှိနှိုငျးခဲ့ပွီးနောကျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို အရယူမယျဆိုတဲ့ ဘုံပနျးတိုငျအတှကျ နှဈဖကျသဘောတူညီမှုရခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူက စီးတီးမှာ နောကျထပျ ၄ နှဈထပျနဖေို့ ဖွဈလာတယျ။
” နှဈတှသောပွောငျးသှားတယျ၊ ဒီကြိနျစာဆိုးခညျြးပဲ ” …. ဒါက မနှဈက လိုငျယှနျကိုရှူံးပွီး မနျစီးတီး UCL က ထှကျရတော့ ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ နှုတျက ထှကျလာတဲ့ စိတျပကျြလကျပကျြစကားဖွဈတယျ။ တကယျလညျးမှနျကနျနတေယျ။ စီးတီးက ကှာတားဖိုငျနယျကနေ နောကျဆုံး ၃ နှဈဆကျထှကျခဲ့ရတဲ့ အသငျးဖွဈတယျ။
မနျစီးတီးနဲ့အတူ ဒီဘရိုငျးနား မကိုငျမွှောကျရသေးတဲ့ တခုတညျးသော အောငျမွငျမှုက ခနျြပီယံလိဂျဖလားဖွဈတယျ။ ဒီနှဈမှာတော့ ဂှါဒီယိုလာက မနျစီးတီးနဲ့ နောကျဆုံး ၅ နှဈအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ UCL ဆီမီးဖိုငျနယျကို တကျဖို့ မောငျးတငျထားတယျ။ ဒေါ့မနျကို ကှာတား ပထမ အကြော့မှာ ၂-၁ နဲ့ နိုငျထားတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျဖလားက ဘယျလျဂြီယံသားရဲ့ အိပျမကျလညျးဖွဈတယျ။ မနျစီးတီးရဲ့ အိပျမကျလညျးဖွဈတယျ။ ပပျ ဂှါဒီယိုလာရဲ့အိပျမကျလညျး ဖွဈတယျ။ ဘုံအိပျမကျတှပေေါငျးဆုံလာခြိနျမှာ စိတျပကျြခဲ့ရတဲ့ အတိတျဆိုး၊ အနာဆိုး၊ ကြိနျစာဆိုးကို တျောလှနျဖို့ဖွဈလာတယျ။
အခုလာမယျ့ ဒေါ့မနျနဲ့ ကှာတားဒုကြော့ဟာ ဂှါဒီယိုလာလကျထကျ အရေးအပါဆုံးနဲ့ သမိုငျးကိုအသဈရေးထိုးဖို့ဖွဈလာတယျ။ ဒီဘရိုငျးနားက မှျောဆရာတယောကျအနနေဲ့ စီးတီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျကြိနျစာဆိုးကို ခဖြေကျြပေးနိုငျမလားဆိုတာကတော့…….။
မန်စီးတီးအသင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကပဲ သူတို့အသင်းရဲ့ မှော်ဆရာ ဒီဘရိုင်းနားကို ၄ နှစ် သက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်။ တနှစ်ကို ပေါင်သန်း ၂၀ ပေးချေရမယ်။ ဒါဟာ မန်စီးတီးကို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ အရှိန်အဝါဖြစ်ပြီး သူက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ လစာအမြင့်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်ရင် သူက စာချုပ်သစ်ကိစ္စမှာ မန်စီးတီးနဲ့ စကားပြောဖို့ အေးဂျင့်ကို အသုံးမပြုဘူး။ Data ကုမ္ပဏီကို အပ်ပြီး သူ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Report ရေးခိုင်းခဲ့တယ်။ ထွက်လာတဲ့အဖြေက ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သလို အံ့အားသင့်စရာကောင်းတယ်။
ဒီဘရိုင်းနားကို ဆုံးရှုံးရရင် မန်စီးတီးဟာ သမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံးရယူဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ အလှမ်းဝေးသွားမလဲဆိုတာ Data နဲ့ စာတမ်းက အတိအကျထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာ UCL ကိုသိမ်းမယ်လို့ ဖလား ၄ လုံး အိပ်မက်မက်နေတဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ ဂွါဒီယိုလာအတွက် ငြင်းကွယ်မရတဲ့ အမှန်တရားဖြစ်တယ်။
သူက ဒါကိုကိုင်ပြီး မန်စီးတီးရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ သူဘယ်လောက်ထိ အခရာကျနေလဲဆိုတာ ပြောပြီးသားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ စာချုပ်အတွက် ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို အရယူမယ်ဆိုတဲ့ ဘုံပန်းတိုင်အတွက် နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူက စီးတီးမှာ နောက်ထပ် ၄ နှစ်ထပ်နေဖို့ ဖြစ်လာတယ်။
” နှစ်တွေသာပြောင်းသွားတယ်၊ ဒီကျိန်စာဆိုးချည်းပဲ ” …. ဒါက မနှစ်က လိုင်ယွန်ကိုရှူံးပြီး မန်စီးတီး UCL က ထွက်ရတော့ ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ နှုတ်က ထွက်လာတဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်စကားဖြစ်တယ်။ တကယ်လည်းမှန်ကန်နေတယ်။ စီးတီးက ကွာတားဖိုင်နယ်ကနေ နောက်ဆုံး ၃ နှစ်ဆက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ အသင်းဖြစ်တယ်။
မန်စီးတီးနဲ့အတူ ဒီဘရိုင်းနား မကိုင်မြှောက်ရသေးတဲ့ တခုတည်းသော အောင်မြင်မှုက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ဂွါဒီယိုလာက မန်စီးတီးနဲ့ နောက်ဆုံး ၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် UCL ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ဖို့ မောင်းတင်ထားတယ်။ ဒေါ့မန်ကို ကွာတား ပထမ အကျော့မှာ ၂-၁ နဲ့ နိုင်ထားတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားက ဘယ်လ်ဂျီယံသားရဲ့ အိပ်မက်လည်းဖြစ်တယ်။ မန်စီးတီးရဲ့ အိပ်မက်လည်းဖြစ်တယ်။ ပပ်ရဲ့အိပ်မက်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဘုံအိပ်မက်တွေပေါင်းဆုံလာချိန်မှာ စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ဆိုး၊ အနာဆိုး၊ ကျိန်စာဆိုးကို တော်လှန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ အခုလာမယ့် ဒေါ့မန်နဲ့ ကွာတားဒုကျော့ဟာ ဂွါဒီယိုလာလက်ထက် အရေးအပါဆုံးနဲ့ သမိုင်းကိုအသစ်ရေးထိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဒီဘရိုင်းနားက မှော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ စီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကျိန်စာဆိုးကို ချေဖျက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့…….။
၀ကျဈဟမျးမှာ ထူးရှယျခွစှေမျးပွနတေဲ့ အာဆငျနယျပရိသတျတှမေခဈြတဲ့ လငျဂတျကို ချေါယူဖို့ အာတီတာစီစဉျနေ